မြင့်မားသောတောက်ပ p10 Outdoor ဒစ်ဂျစ်တယ် ဦး ဆောင်သောကြော်ငြာဘေလ်ဘုတ်ကြော်ငြာဗွီဒီယိုနံရံ - ဦး ဆောင်ဗီဒီယိုနံရံကပ်စက်ရုံ
LED P10 သည် outdoor high-definition design အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောဒီဇိုင်းအရောင် SMD LED display ဖြစ်သည်, စီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာများတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်, ကစားကွင်းများနှင့်၎င်းသည်မြင့်မားသောတောက်ပမှုနှင့် refresh rate ဖြစ်သည်.
အမျိုးအစား: ပုံသေကြော်ငြာမျက်နှာပြင် Tag: outdoor led wall price
အပြင်ဘက် P10 LED ဗီဒီယိုနံရံ, ရေစိုခံ SMD IP65 display screen ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်, စံအရွယ်အစား 960mmx960mm. Fixed led screen တပ်ဆင်မှုအတွက် LED Display Panel
2: အလေးချိန်နည်းသည်, 35KG / pc အကြောင်းကို
3: Fast Lock ဒီဇိုင်း, လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်း
5: စံအရွယ်အစား Panel ကို: 320*160မီလီမီတာ
6: စံကက်ဘိနက်အရွယ်အစား: 960*960မီလီမီတာ
7: Standard LED Display အမျိုးအစားများအားလုံးအတွက်စံ LED LED Display Cabinet Screw Holes များကိုပေါင်းစည်းပါ.
8: Multi ရေစိုခံဒီဇိုင်း, လုံခြုံရေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော.
9: အနိမ့်စားသုံးမှု, အလွန်ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာ.
10: မြင့်မားသော Refresh Rate,နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်အတူမြင့်မားသောမီးခိုးရောင်အဆင့်ကို
11: အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်. ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပုံရိပ်နှင့်ဗီဒီယို display ကို.
အယ်လ်အီးဒီ SMD 3in1
module အရွယ်အစား 320*160မီလီမီတာ
module resolution ကို 32*16အစက်
သိပ်သည်းဆ 10000 pixel / sqm
ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား LED 960*960*85(မီလီမီတာ)
ကက်ဘိနက်အလေးချိန် 35kg / pc
တောက်ပ 5500-6500 cd / m2 (Nits)
အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုရန်အကွာအဝေး 10မီတာ 100 အထိ
မီးခိုးရောင်အဆင့် 14 bits
ကြီးမားသော P5 P6 P8 P10 LED Display Screen အပြင်ဘက်ကြော်ငြာခြင်းသည် Billboard ဖြစ်သည်
အလင်းရောင်ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်အတွက်အလင်းဝင်ရိုးစွန်းရှိ P6 display